Oromiyaa/Itiyophiyaa Keessatti Nageenya Waaraa Fiduuf Ejjeennoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo! | QEERROO
Posted on May 24, 2018 by Qeerroo
Akeeka Qeerroo Bilisummaa Oromoo karaa nagaan rakkoo siyyaasaa furuuf bobbaafame kan yeroo dhiyoo asiitti karaa mootummaa deebiin waraanaaf ariisaa barattootaa jumulaan ilma Oromoo mana barnootaarraa ari’uuf ajjesuun Wayyaanee kan yaadatamudha. Yakkoota ciigasiisoo ajjeechaa,hidhaan dararuu,qabeenya saamuu,deegsuu fi hamlee cabsuun dabalatee hedduun irratti raawatee jira.
Gochaa jallataa ji’a Gannaa Mootummaa Wayyaanee raawwate kan haalonfate Qeerroo Bilisummaa Oromoo kulkulfannaa hamaa keessa Onkoloolessa 4? 2015 ayyaana Irreechaa jila Oromoo Guddaa irratti akka argamuu qabu walii dhaamee xiiqeffannoo guddaan amantaan utuu wal hinqoodin magaalaa Bishooftuutti argame. Mootummaan ajjeesaan dhiiga Oromoon ala jiraachuun jireenya itti hinfakkanne bakka jiila Oromootti, bakka nagaaf bakka uumaaf uumani itti walargutti, marroo dabalataa dhukaasa banuun ilmaan Oromoo nagaa harka qullaa Waaqaa galateefachuuf bahan, uummata gadda guddaa keessa jiru irratti gadda irratti gadda dabaluun dhukaasa baneen ilmaan Oromoo 1000 kuma tokko ol bakka tokkotti sababa tokko malee guyyaa tokkotti ajjeese.